February « 2020 « Online Tv Nepal
सन्दीप लामिछानेले पूरा गरे कीर्तिमानी १ सय विकेट !
नेपाली क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले टी-ट्वान्टी क्रिकेटमा १ सय विकेट पूरा गरेका छन् । थाइल्याण्डमा जारी एसीसी इस्टर्न रिजन पुरुष टी-ट्वान्टी कप क्रिकेटको पहिलो खेलमा मलेसियाविरुद्ध विकेट लिँदै सन्दीपले १०० विकेट पुरा गरेका हुन् । यससँगै सन्दीपले टी-ट्वान्टीमा १०० विकेट लिने पहिलो नेपाली खेलाडीको कीर्तिमान बनाएका छन् । सन्दीपले आफ्नो पहिलो
धर्मशास्त्र– शनिबारको दिन भुलेर पनि नगर्नुहोस् यी काम ! जानी राखौ
शनिवारको दिन शनिदेवको विशेष दिन हो । र, शनिदेवलाई न्यायका देवता मानिन्छ । शनिदेवलाई प्रसन्न गर्नका लागि यस दिन सर्सिउको तेल, कालो तिल आदी चढाइन्छ । ज्योतिषीय मान्यता अनुसार जसको कुण्डलीमा शनिदोष हुन्छ उनीहरुले शनिदेवको पूजा गर्न जरुरी छ । शनिवारको दिन केही काम गर्न वर्जित गरिएको छ– आपँको अचार
शनिको प्रभाव कुन राशीमा कस्तो ? जानी राखौ
न्यायका देवता शनिको हरेक राशीमा अलग अलग प्रभाव रहने गरेको छ । ज्योतिषविद्का अनुसार धनु राशीमा शनि धनका लागी त सिंह राशीमा वृद्धि विकाशमा जिम्मेदार रहन्छ । शनिको प्रभाव नकारात्मक र सकारात्मक दुबै हुने भएकाले कतिपय अवस्थामा यसले जिन्दगी बनाउने र बिर्गाने सम्मको स्थिति ल्याउँछ । कुन राशीमा शनिको प्रभाव
सुत्नु अघि कालिन्चोकको दर्शन गर्दै भोलि फाल्गुन १८ गते आइतबारको राशिफल पढ्नुहोस् ! भेटि स्वरूप एक एक शेयर गरौँ
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) नयाँ नयाँ कामको प्रस्ताब आउँनेछ भने आर्थिक ब्याबस्थापनका मुद्दाहरु सजिलै हल गर्न सकिनेछ । खोज तथा अनुशन्धानको क्षेत्रमा थोरै समय लगानि गर्दानि उत्कृष्ट नतिजा आउँदा खुसिले उँचाई नाघ्नेछ । समाजसेवी तथा राजनिती गर्नेहरुले आज जनताको समर्थन पाउने तथा प्रतिपर्धिहरुलाई सजिलै हराउन सक्नेछन् । परिवारका साथ रमाईलो बाताबरणमा जमघट
४ लाख भन्दा धेरै नेपाली रहेको कतारमा पनि देखियो कोरोना भाइरस ! जानकारीको लागि सेयर गरौ
मध्यपूर्वी मुलुक कतारमा समेत कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ । कोरोना भाइरसले आक्रान्त पारेको अर्को मध्यपूर्वी मुलुक इरानबाट फर्काइएका व्यक्तिमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो । कतारको स्वास्थ्यमन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै कतारको समाचार संस्था क्यूएनएले जनाएअनुसार ३६ वर्षे संक्रमितको स्थीर अवस्थामा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । इरानबाट आपतकालीन उद्धार गरी स्वदेश
शनिदेवलाई खुसी पार्न के के नखाने ? जानी राखौ
शनिवार पात्रो अनुसार हप्ताको सातौं दिन पर्छ । यसको नामाकरण शनिग्रहको रूप मानिने शनि देवताको नामबाट गरिएको हो । हिन्दु धर्मको किवदंती अनुसार शनिबारकी माता कालीमाता हुन् । अझ शनिदेवलाई न्यायको देवता मानिन्छ । धर्मशास्त्र अनुसार, यदि कुनै व्यक्तिको कुण्डलीमा शनिदोष छ भने त्यस्ता व्यक्तिले शनिबारको दिन भोजन गर्दा विशेष
शनिदेवलाई प्रशन्न बनाउन कालो तिल दान गर्नुहोस्, यस्तो फल मिल्नेछ ! जानी राखौ
कसैलाई पनि शनिदेवको दृष्टि नपरोस् भन्ने उदेश्यले शनिबारका दिन शनिदेवको पूजा गरिन्छ। यस दिन व्रतालुहरूले कालो वस्त्र लगाउनु अनिवार्य हुन्छ भने रात्रीभोजनमा नुन नमिसाई खानुपर्ने हुन्छ । मानव जीवनमा राहु, केतु जस्तै शनिको दशाले पनि अशुभ हुन्छ । यसको दोष निवारणका लागि हनुमान चालिसा जपेर बस्नुस् श्रीवृद्धि हुनेछ । ज्योतिषका
धार्मिक मान्यता : शनिबार गर्न नहुने ५ काम ! जानी राखौ
शनिवारको दिन शनिदेवको विशेष दिन हो । शनिदेवलाई न्यायका देवता मानिन्छ । शनिदेवलाई प्रसन्न गर्नका लागि यस दिन सर्सिउको तेल, कालो तिल आदी चढाइन्छ । ज्योतिषीय मान्यता अनुसार जसको कुण्डलीमा शनिदोष हुन्छ उनीहरुले शनिदेवको पूजा गर्न जरुरी छ । शनिवारको दिन केही काम गर्न वर्जित गरिएको छ – १ आपँको
बच्चा बोकिरहेकी हेमा श्रेष्ठलाई लाठी लाठी हान्ने इन्स्पेक्टरमाथि छानविन सुरु ! खासमा के भएको थियो घ’टना…..
महानगरीय प्रहरी प्रभाग, भैंसेपाटीका प्रहरी निरीक्षक देवीप्रसाद पौडेलमाथि प्रहरीले आन्तरिक छानविन सुरु गरेको छ । भैसीपाटि स्थित नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त सहायक रथी हेम खत्रीको घरमा जम्मा भएका महिलाहरु माथि धकेल्दै लाठि चार्ज गरेपछि इन्सपेक्टर पौडेलमाथि छानविन सुरु भएको हो । प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट निर्देशन आएपछि ललितपुर प्रहरी परिसरले छानविन
नेपाल आइडलबाट बाहिरिएपछि रचना रिमालले लेखिन हृदयस्पर्शी स्टाटस, आजबाट तपाईंहरु सबैकि “रचना” भएकी छु…..
चर्चित गायन रियालिटी शो ‘नेपाल आइडल’को टप सातबाट झापाकी रचना रिमाल आउट भएकी छन् । भोटिङ कम भएपछि उनि शो बाट आउट भएकी हुन् । हरेक हप्ता सबै भन्दा कम भोट ल्याउने एक जना प्रतिष्पर्धी आउट हुने शो को नियम अनुसार नै रचना आउट भएकी हुन् । यद्यपी यस अघिको